(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/06/2021)
Isimo sezulu Mediterranean, nengqalasizinda yezokuthutha eyizingqabavu, amathuba amahle kakhulu ukuhamba, kanye nemisebenzi ehlukahlukene nabantu nokungcebeleka, ukwenza Spain pretty okuningi ezweni iphupho. Akhiwe-Southwestern Europe, Spain nakanjani ayisizi omunye kakhulu ebabazekayo isitimela uhambo e-Europe. Spain Isimo sezulu nge hot, ehlobo ezomile nobumnene, Ubusika yezimvula. Njengoba Spain ingenye amazwe enkulu European, it has angaphezu kwelilodwa sezulu. Ngakho, ungalindela isimo sezulu esithonywe kakhulu ezwenikazi ezweni elisentabeni enkulu emaphakathi: ulungele esishisayo, ehlobo ezomile futhi obubandayo. Ukuhumusha: uma uvakasha Spain futhi uhlela ngokuhlala izinyanga ezimbalwa, letha isudi yokugeza nejakhethi.
Britain – Okubi kakhulu ohlwini lwamazwe aseYurophu anesiZulu Esihamba phambili
Nakuba architecturally ngokuphelele langa, ngokomlando, futhi ngokwesiko, Britain akuyona omunye Europe Amazwe ne Isimo Sezulu Kuhle. Awu, ngaphandle kokuthi ukujabulela inkungu njalo, imvula, lwamafu grey kakhulu kangangokuba ukhohlwe lokho eminye imibala ibukeke. Umoya manzi futhi Ukungaqiniseki yayo jikelele musa akusizi. Nakuba eBrithani inakho lezimanga libalele lapha nalaphaya, sikucebisa hhayi (wake!) ukuphuma ngaphandle isambulela futhi spare isikibha. Bheka la 4 isitimela sokuvakasha pre-uhambo essentials eYurophu ngaphambi uya ohambweni lwakho.
Mhlawumbe ngelinye lamazwe eliphawuleka kunawo wonke-European, I-Iceland iyaziqhenya ngemifula yayo emangalisa, engapheli Emerald namathafa oluhlaza, ezimhlophe entabeni iphakama, nezimpophoma umbukwane. Oh, ake Ungakhohlwa izinguzunga zeqhwa yayo omkhulu, iziphethu iziphethu, futhi ezinye friendliest, abantu emhlabeni! Nokho, ngeshwa, kuleli zwe zaseScandinavia uba nedumela elibi ngokuba sezulu yayo ezingalindelekile futhi ezimbi. Iceland has cishe 320 izinsuku amafu grey, 215 izinsuku imvula, snowstorms, futhi blizzards. Akusikho labo abakufunayo ukuze ujabulele vacay libalele.